Xog: R/W Abiy Ahmed oo Addis Ababa ku casuumay Muuse Biixi + Qorshaha - Caasimada Online
Home Somaliland Xog: R/W Abiy Ahmed oo Addis Ababa ku casuumay Muuse Biixi +...
Xog: R/W Abiy Ahmed oo Addis Ababa ku casuumay Muuse Biixi + Qorshaha
Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu safar ku tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Ma jiro war rasmi ah oo la xidhiidha socdaalka madaxweyne Biixi, laakiin warar ay heshay Caasimada Online, ayaa sheegay in Madaxweyne Biixi uu Addis Ababa ku tagi doono martiqaad uu ka helay raysalwasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
Madaxweyne Biixi ayaa wuxuu Addis Ababa markii u horaysay kula kulmi doonaa Raysal wasaaraha Itoobiya, oo la filayo inay ka wada hadlaan xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya. Madaxweyne Biixi ayaa hore u tagay Addis Ababa markii la doortay, waxaanu halkaas kula soo kulmay raysal wasaarihii hore ee is casilay, waxaanu kulanka haddu noqonayaa kii u horeeyay ee dhex mara madaxda Somaliland iyo Raysal wasaaraha cusub ee Itoobiya.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa toddobaadkii hore Addis Ababa kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya, waxaana la aaminsanyahay inay labada wasiir markaas isla qorsheeyeen socdaalka Madaxwene Biixi ee Addis Ababa.
Somaliland iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya xidhiidh dhinacyo badan, waxaana xidhiidhadaas hadda ku soo biiray saamiga 19% ee Itoobiya laga siiyay maalgelinta dekedda Berbera.